YAA AH DIYAARADDA, DOORKIISA UU KU LEEYAHAY NOLOSHA BEES - BEEKEEPING
Wixii dad ah oo ka warqabta kaydinta dhirta adigoo maqlaya, way adagtahay in la fahmo waxa ay tahay diyaaradda iyo sababta loo baahan yahay in xayawaanka shinnida ah. Dad badan ayaa ogyahay oo kaliya dhinaca xun ee jiritaanka jiritaanka: duunistu waxba kama qabanayso rugta, laakiin waxay cuntaa shan. Si kastaba ha noqotee, xayndaab kasta, dabiicigu wuxuu ku siinayaa jiritaanka shakhsiyaad tiro badan. Maxay tahay sababta ay u baahan yihiin, maxay tahay darawal u eg iyo waa maxay macnaha jiritaanka?
Waa muhiim! Mararka qaar diyaarad shinida ah ayaa lagu wareersan yahay shinbiraha. Kuwani waa shakhsiyaad kala duwan. Marka hore, waxay ku kala duwan yihiin galmada. Drone waa nin, gabadhuna waa haween. Waxay ka timaadaa shinniinka quudiya boqoradda. Haddii ay dhimato ama ay daciifto, waxay bilaabaan inay isku darsadaan caanaha shinni, qaarkoodna waxay u kobciyaan dumarka ukunta dhinta. Si kastaba ha noqotee, ukumaha ay gashadaan iyaga, oo aan bacrimiyo by lab ah, sababtoo ah iyaga oo kaliya waxay dillaacin kartaa kaliya darbiyo aan la horumarin. Xaqiiqdu waxay tahay in shinni noocan oo kale ahi aanu ahayn cilmi nafsi ah oo awood u leh inuu la midoobo diyaaradda iyo ukumaha bacrimiya ukumahaan. Sidaa daraadeed, had iyo jeer waa lagama maarmaan in la hubiyo in ay jirto boqor ka mid ah rashka.
Yaa diyaarad ah: sharaxaadda muuqaalka muuqaalka shinni lab ah
Sidaa daraadeed, aan aragno nooca diyaarada ah ee shinnida leh iyo waxa uu yahay. Drone waa shinni lab ah oo hawshiisu tahay bacriminta ukunta ilmo-galeenka. Sidaa darteed, muuqaalkiisa ayaa aad uga duwan labada boqor ee nafteeda iyo shinnida shaqaalaha. Cayayaankaani waa mid aad u weyn marka loo eego shinni caadiga ah. Dhaqdhaqaaqa ilaa 17 mm, miisaankiisu waa 260 mg.
Ma taqaanaa? Diyaaradaha duulimaadka ka soo baxa rugta aan lahayn horraan duhurkii, yaraa inta badan fiidkii. Duulimaadkoodu waa kala duwanyahay codka baska, marka imaatinka diyaaradaha ayaa la yareeyaa diyaaradda duulimaadka leh cod leh culus, sida haddii daal soo dhaco.
Waxay leedahay baalal fiican oo horumar leh, indhaha oo weyn, laakiin proboscis malab yar. Marka yar yari in ka baxsan rugta a drone ma nafaqo karo. Ma laha burushyada leh shinni ka soo baxa manka, ma uusan soo saarin mallaarro iyo dambiilo oo ay ka mid yihiin manka. Bees ma laha qanjidhada oo ku lug leh sameynta caano shinni iyo wax caano. Ma lahan xannibaad, sidaas darteed cayayaanka ayaa gabi ahaanba difaacaya.
Wuxuu si wanaagsan u horumariyay qaybaha jirka ee caawiya fulinta hawlaha lagu dhiibay dabiiciga ah - oo lala galmoodo haweenka. Aragga quruxda, urta, xawaaraha sare ee duulimaadka - kuwani waa faa'iidooyinka ugu muhiimsan. Waxay ku nool yihiin wakhti gaaban, laga bilaabo Maajo ilaa Agoosto, laakiin inta lagu jiro waqtigan hal drone ayaa leh waqti ay cunaan afar jeer shinbiraha caadiga ah.
Doorka dowrka ah ee ku jira qoyska shinnida, hawlaha iyo ujeedada
Su'aasha macquul ah ayaa soo baxday, sababta aan ugu baahannahay in aan u baahanno diyaaradaha dayuuradaha, haddii aanay wax soo saarin, ma awoodaan inay iskooda daryeellaan isla markaana isla markaa qaataan qaar ka mid ah shakhsiyaadka faa'iidada leh? Waa in la fahamsan yahay in cayayaankaasi ay qaadaan walxaha hiddaha ee caan dhan, waxay yihiin kuwa keliya ee bacrimiya ilmo-galeenka.
Ma taqaanaa? Drones, oo ah wiilasha ilma-galeenka, waxay haystaan ​​nuqulka saxda ah ee genom. Mid kasta oo lab ah wuxuu leeyahay 16 koromosoom, halka ilmo-galeenka - 32. Isku-dhicistaani waxay dhacdaa sababtoo ah diyaaraduhu waxay ka timaadaa ukumo aan caqli ahayn, taas oo ah, shinni ma lahan lab ama dhidig.
Shinbiraha ayaa diyaar u ah inay labistaan ​​laba toddobaad kadib markii ay ka soo kacaan malabkii. Daaweynta ilmo-galeenka kuma dhacdo rugta, laakiin banaanka, iyo inta lagu jiro duulimaadka. Taasina waa sababta uu dabeecaddiisa u muujiyay aragti fiican iyo jawaab celinta duulimaadka. Markaad raadineysid dheddigga, diyaarada ayaa qaadata qadada saacadaha qorraxda waxayna sameyneysaa saddex nooc maalin kasta. Soo noqoshada had iyo jeer ka hor qorrax dhaca. Duulimaadka cayayaanka wuxuu noqon karaa ilaa nus saac. Marka shinniisha boqoradda la helo oo la qabto, diyaaradaha ayaa duulaya diyaarad qiyaastii 23 daqiiqo.
Howlaha kale ee darawalka waa in lagu ilaaliyo heerkulbeegga buulka. Marka uu qabowgu yimaado, iyo ma'ahannada aan laga saarin rugta, waxay ku garaacayaan ukunta, iyaga oo kuleyliya kulaylka.
Ma taqaanaa? Tirada drones ee ka hadhay dayrta waxay ka hadlaysaa waxqabadka ilmo-galeenka. Qaar badan oo ka mid ah, waxqabadku wuu hooseeyaa. Tani waa calaamad muujinaysa in ay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyinka habboon.
Haddii shimbir shimbir ah ay joogaan rugta jiilaalka, xilliga gu'ga ma sii jiri doonto muddo dheer. Waxay la kulantaa hargab xun, daciif ah iyo ugu badnaan bil ka bacdi marka ay jirriddu ay dhimato. Joogitaanka drone-kicinta ayaa muujinaysa in ilmo-galeenka uu yahay mid gaboobay oo aan waxba galabsan, ama ay wada dhinteen.
Qaababka wareegga nolosha ee darawalka
Diyaaradaha drones ayaa ka soo baxa ukumada aan dhalan ee rasaasyada boqoradda. Waxay dhacdaa maalinta 24-aad ka dib markaad gashid. Saddex maalmood ka hor tan, shinni shaqaale ayaa dhasha, iyo siddeed waa shinni boqoradda dhalinyarada ah. Unugyada leh dirxiga ee darawallada waxay ku yaalaan wareegga malabku. Haddii aysan jirin meel ku filan, shinni ka shaqeynaya iyaga oo ku dhajiya unugyada shinni malabka. Guud ahaan, qiyaastii 400 oo diyaarad ayaa ku kortay hal qoys, laakiin tirada cayayaanka ayaa mararka qaarkood ka badan kun.
Bilowga Maajo, diyaaradda ayaa ka baxaysa unugga, illaa 10 maalmood malabku si firfircoon ayuu u quudiyaa, hubinta abuuritaanka saxda ah ee cayayaanka. Laga bilaabo maalinta toddobaad, wiilku wuxuu bilaabmaa duulimaadkii ugu horeeyay si uu u barto deegaanka. Laba todobaad kadib, wuxuu u duulayaa ujeedo qaas ah - raadinta haweeney si ay u wada shaqeeyaan.
Ma taqaanaa? Dumarka haweenku waxay helayaan, waxay ku qabtaan walaxda hawada. Isla mar ahaantaana waxa uu kala soocmi karaa oo kaliya meel fog oo qotodheer iyo dherer ka badan 3 mitir dhulka ka sarreeya, oo u dhow ayuu u duulayaa haweenka, inta badan wuxuu ku tiirsan yahay indhihiisa. Awood la'aanta in lagu qabsado feeraha meel u dhow ayaa sharraxaysa sababta moobidku uusan u dhaceynin rugta.
Halkaasi waa inuu u dagaalamaa xaqiisa si uu uga tago farcankiisa, sidaas darteed shakhsiyaadka daciifka ah ayaa la saaraa, oo kaliya kuwa shimbiraha ah ee qaada walxaha ugu xooggan ee unugyada jirkooda ku jira. Wixii bacriminta ee haweenka, qiyaastii 6-8 ayaa loo baahan yahay. Dhamaantood, iyagoo fulinaya ujeedadoodu, waxay ku baaba'ayaan waqti gaaban.
Ka hor intaanay fulin waajibkooda, dayuuradaha ayaa ku noolaanaya xayawaan isku mid ah. Laakiin, ka duulaya rugta ay, waxay ku xisaabtami karaan caawinta beeska qoysaska kale. Looma cayrin oo had iyo jeer la quudiyo sababtoo ah waxay ogyihiin cidda ay tahay diyaaradda iyo in uu noqon karo lammaanaha ilma-hooda.
Intee in le'eg ee drone ku noolaan doono waxay ku xiran tahay arrimo badan: haddii uu jiro ilmo raxan raxan, intee le'eg ayuu awood u leeyahay bacriminta, waxa shuruudaha guud ee qoysku yahay. Inta badan waxay kuxirantahay xaaladaha cimilada. Laakiin celcelis ahaan waxay ku nool yihiin ilaa laba bilood.
Waa muhiim! Mararka qaarkood, si loo ilaaliyo mugga malab, beekeepers ayaa gooyaa unugyada leh drones on shanlada. Laakiin tani waa tallaabo adag, maxaa yeelay shinnirrada shaqeynaya ayaa wali sii wadi doona tirada daruuriyaadka loo baahan yahay, iyaga oo buuxiya unugyo cusub iyaga. Habka ugu wax ku oolsan waa in la hubiyo in ilmo-galeenka ku yaal rugta aan ka weyneyn labo sano. Kadibna waxay soo saaraan darawallo yar.
Drones ee xayiraadda shinni waa cuntada ugu muhiimsan ee cunta. Sidaa darteed, sida ugu dhakhsaha badan ee qiyaasta nectar waa la yareeyey, bees shaqeeya tuuro unugyo aan cidla ah, iyo ma sii dheer quudinta dadka waaweyn, iyaga oo ka riixaya malab. Laba maalmood ama saddex maalmood ka dib, markay noqdaan kuwa tabar daran gaajada, waxaa laga saaraa rugta. Maadaama aysan awoodin inay naftooda quudiyaan oo naftooda daryeelaan guud ahaan, si deg deg ah ayey u dhintaan. Si kastaba ha noqotee, ilmo-galeenka ayaa joojiyay inuu dhigo ukumo ama raxan ayaa laga tagay iyada oo aaney jirin, diyaaradaha ayaa weli ku jira rugta iyaga oo ilaalinaya hiddaha hidaha. Sababahan oo kale waa sida kaliya ee looga baxsan karo diyaaradaha aan la kaxaysan. Haddii ay dhakhso u helaan rugta aan lahayn ilmo-galeenka, waxay ku farxi doonaan inay aqbalaan qoys cusub.
Drones ee qoyska shinni ah: dhammaan khayraadka iyo xayawaanka
Dhab ahaantii, way adagtahay in la yiraahdo cidda ugu muhiimsan ee xayawaanka shinni ah. Dhinaca kale, dhalmada caanuhu waxay kuxirmeysaa ilmo-galeenka, laakiin dhanka kale, haddii aysan jirin duulaan duulaan ah, ma jiri doonto dillaac. Ka dib dhan, waxay ka kooban tahay beeska shaqada, kaas oo ku dhalan kara oo kaliya laga bilaabo ukumaha bacrimiyey. Sidaa daraadeed, miisaaminta faa iidada iyo qulqulatadu maaha kuwo ku haboon. Haa, waxay si dhab ah u burburiyaan kaydka shinni. Tixgeli in mid ka mid ah cayayaanka noocan oo kale ahi yahay afar, oo ogaanaya waxa dariiqa loo yaqaan 'dragon', qofkasta oo beekhaamuhu fahmaa qiyaasta khasaarahiisa. Laakiin waa in aan fahannaa in khasaarahaas aan laheyn wax malab ah. Intaa waxaa dheer, burburinta kaydka malab - dhibaatada keliya ee joogitaanka drones ee qoyska.
Ma taqaanaa? Si aad u quudiso kiilo daroogo, 532 g oo malab ah ayaa la cunay maalintii, 15.96 kg bishii, iyo ku dhowaad 50 kg oo malab ah xagaaga oo dhan. Kiiloomitir drones, waxaa jira ilaa 4 kun oo qof.
Laakiin waxaa jira faa'iidooyin dheeraad ah. Xilliga dayrta, marka ay timaado waqti dheellitirka daroogada, qof ayaa xukumi kara xaaladda qoyska. In la ogaado waxa uu u eg yahay darawalku, waa ku filan in la tiriyo tirada meydkooda oo ku wareegsan rugta. Haddii ay jiraan wax badan oo iyaga ka mid ah - wax walba waa inay noqdaan raxan; Intaa waxaa dheer, cayayaankaasi waxay mararka qaarkood ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa dadka mustaqbalka ee beeraleyda shaqeeya. Marka heerkulka hawadu uu si muuqata hoos ugu dhaco oo uu khatar galiyo awooda dirxiga, waxay ku dhuftaan unugyada, iyagoo kululeynaya dirxiga iyagoo leh awoodahooda waaweyn iyo kuwo awood leh. Dhab ahaantii, tani waxay sharraxaysaa dhammaan sharraxaadda cidda ay diyaaraddu ku socoto shinni, waa maxay faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka.
Daroogooyinka: Su'aalaha iyo Jawaabaha Aasaasiga ah
Badanaa, markaad baranayso dhacdadan oo ka mid ah rugta sida diyaaradaha, qaar badan ayaa leh su'aalo dheeraad ah. Marka xigta, waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno nooca caadiga ah.
Sababtee kadib markii mulkiilaha moobaylku uu lumiyo dhacsiin?
Wixii labiska ah, shinni lab ah ayaa sii deynaya xubinta dhirta, taasoo horayba ugu jirtey jidhkeeda. Nidaamkani wuxuu la socdaa mabda'a ah inuu dibadda u soo jeesto, marka derbiyada hoose ay noqdaan dibadda. Dhamaadka geedi socodka, baska xubnaha guska sidoo kale waa la jeexay. Isku kalsoonaanta jidhka ayaa leh geesaha hoos loogu riixo dhinaca dambe. Markuu ku dhajiyo qolka ilmo-galeenka, ragga wuxuu ku dhex jiraa jeebabyada wadaraha ah ee geesaheeda, isaga oo ka tegaya shahwadooda. Sida ugu dhakhsaha badan ee xubnaha taranka ee labka ahba gebi ahaanba la jeexay, drone way dhimataa.
Ma taqaanaa? Diyaaradaha ayaa duulaya dhabarka ilmo-galeenka weyn. Markii ugu horraysay, markay ka soo gudubtay, waxay isku qarinaysay duulimaadka waxayna isla markiiba dhimatay. Dabadeedna way dhaaftay. Sidaas darteed waxay isbeddelayaan illaa ilmo-galeenku dhameeyo mater-ka. Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa googoynaya xubinta ka hor inta aysan gaarin ilmo-galeenka, isla markaana waxay u dhintaan midigta dusheeda.
Miyuu suurtogal yahay, in la eego diyaaradda, si loo ogaado caleenta shinnida?
Dabcan Tusaale ahaan, shinni xayawaanka Caucasian waxay leeyihiin daroogo madow, halka shinni loo shaqeeyo waa mid naxaas leh. Dhalashada Talyaaniga waxay leeyihiin drones guduudan, halka qoryaha dhexe ee Ruushku leeyihiin madow-cas.
Waa maxay tayada ay diyaaradda u gudbinayso carruurta?
Waxaan xusuustaa in shinnida labka ah ay ka muuqdaan ukumo aan caqli gal ahayn, taas oo ah, waxay qabaan waxqabadka kaliya ee hooyooyinka. Sidaa darteed, farcanku waxay noqon doonaan mid xoog badan haddii ilmo-galeenka uu yahay mid hodan ah, beesku waa hufan yahay, nabadgelyo leh, ururin badan oo nectar ah oo u dulqaadanaya jiilaalka si fiican. Haddii qoysku aanu ku faani karin sifooyinka noocaas ah, waxaa lagu talinayaa in la beddelo ilmo-galeenka marar badan, iyo sidoo kale in la xakameeyo tirada qoryaha daroogada: isticmaalka daroogooyinka, gooyo qashinka labadii toddobaadba mar. Hase yeeshee, waa muhiim in halkan iyo in aan la dhaafin, burburinta dhammaan ragga - tani waxay aad u wiiqaysaa qoyska.
Markaad fahamtay magaca shinnida labka ah, maxay tahay ujeeddada rugta, iyo waxa noloshiisa nolosheeda, waxaad u dhaafi kartaa khasaare ka soo gaaray beekeeper markii ay shinnida labka ah ku quudiyaan shaqaalaha. Ka dib oo dhan, waxay badbaadiyaan gumeysiga shinni ah ka ba'an, hayntiisa, hoyga, si ay u ilaaliyaan diiran duleedka dirxiga ee bees shaqo. Dhammaan waxaas oo dhan waxay ka hadlaan muhiimadda weyn ee darawalnimada nolosha nolosha.